အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုကိုထိန်းညှိဖို့ကိုဘယ်လို | Ten tips to help you be successful | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
How do you know what is good and bad behavior inanew country? Different cultures behave in different ways. ဤ 10 tips will show you how to be polite in the United States. They will help you adjust to American culture.
ဒီမှာပါ 10 things that show you how to adjust to American culture. They will help you to show respect and be polite in the United States.
1. ပွောဆို “ကျေးဇူးပြု”
အများစုမှာအမေရိကန်များဟုပြော “ကျေးဇူးပြု” သူတို့တစ်ခုခုလိုတဲ့အခါ. ဥပမာ, သင်တစ်ဦးစားသောက်ဆိုင်မှာအစားအစာအမိန့်လျှင်, သငျသညျဆိုသညျကားစေခြင်းငှါ, “ငါဟင်းချိုရပါလိမ့်မယ်, ကျေးဇူးပြု”. If you ask for something and don’t say “ကျေးဇူးပြု”, Americans will think you are rude.
2. ပွောဆို “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်”
Americans say “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်”alot. အချို့သောယဉ်ကျေးမှုခုနှစ်တွင်, လူတွေသာပြောပါ “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” သိသာထင်ရှားသောဖြစ်ရပ်များအတွက်. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌, ပြောဘုံက “ကြေးဇူးတငျစကား” ပင်သေးငယ်တဲ့အမူအရာများအတွက်. ဥပမာ, သငျသညျတစ်စုံတစ်ဦးကိုတစ်ဦးစာအုပ်လက်လျှင်, သူတို့သည်သင့်ကျေးဇူးတင်မယ်. Try to remember to say “ကျေးဇူးတင်ပါတယ်,” especially to anyone who is helping or try to help you.
3. ပွောဆို “တောင်းပန်ပါတယ်”
Americans also say “တောင်းပန်ပါတယ်” အခြားယဉ်ကျေးမှုရှိလူများထက်ပို. ဥပမာ, တစ်စုံတစ်ဦးကမတော်တဆလမ်းပေါ်မှာပေါ်တွင်သင်သို့ bumps လျှင်, သူတို့နှင့်အတူတောင်းပန်စေခြင်းငှါ “တဆိတ်လောက်” သို့မဟုတ် “စိတ်မကောင်းပါဘူး။” အမေရိကန်တွေ, အထူးသဖြင့်အမေရိကန်အမျိုးသမီးတွေ, တစ်ခါတစ်ရံစကားလုံးကိုသုံးပါ “တောင်းပန်ပါတယ်” သငျသညျဖွစျကွောငျးအရာတစျခုခုအတှကျဝမျးနညျးကွောငျးဖျောပွဖို့, သူတို့ကဖြစ်ရပ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်မခံခဲ့ရသော်လည်း. ဥပမာ, သင်တနင်္ဂနွေကိုကျော်ဖျားနာခဲ့သူတစ်ဦးဦးကိုပြောပြဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတစ်ဦးသေဆုံးကြောင်း. သူတို့ကတုံ့ပွနျနိုငျ, “ကိုယ်တစ်ကယ်စိတ်မကောင်းပါဘူး။”
အတော်များများကအမေရိကန်တွေကမယဉျကြေးသောအခြားလူများ၏ရှေ့မှောက်၌ကိုယ်ထင်ရှားဆူညံသံစေရန်ထည့်သွင်းစဉ်းစား. သူတို့ကဓာတ်ငွေ့သွားမကြိုးစား, burp, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကောင်းစွာမသိရပါဘူးအများပြည်သူအတွက်သို့မဟုတ်လူများ၏ရှေ့မှောက်၌ကအခြားကိုယ်ထင်ရှားဆူညံသံစေ. သူတို့ burp ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်တချို့လူတွေကရေချိုးခန်းမှသူတို့ကိုယ်သူတို့ excuse ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျ fart သို့မဟုတ် burp ပြုလျှင်, ပြောဘုံက, “တဆိတ်လောက်။”
5. ပွောဆို “hello” when you meet new people
သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့တစ်စုံတစ်ဦးကဖြည့်ဆည်းလိုက်တဲ့အခါ, အမေရိကန်တွေပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရ, “ဟယ်လို” သို့မဟုတ်, “မင်္ဂလာပါ, တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။” သငျသညျသငျနှငျ့အတူအခြားသူတစ်ဦးဦးရှိပါက, အဖြစ်ကောင်းစွာကြောင့်လူတစ်ဦးမိတ်ဆက်ပုံမှန်က. The next time you meet the person, သငျသညျပွောနိုငျ, “နောက်တဖန်သင်တို့ကိုတွေ့မြင် nice,” သို့မဟုတ်, “ငါပြီးခဲ့သည့်လကသငျသညျတှေ့ဆုံသတိရ. နေကောင်းလား?”
Most Americans will shake your hand when they meet you. If you feel uncomfortable, you can always put your hands together and lean your head forward. This isapolite way to show you don’t want to shake hands. Some Americans will be very surprised that you do not want to shake hands but this is okay. If you are fromaculture where men and women outside of family do not touch each other, explain that politely to the person you are meeting. သင်မသက်မသာခံစားရပါစေသောအရာလုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး.
အမေရိကန်တွေကအခြားယဉ်ကျေးမှုများအနေဖြင့်လူမျိုးထက် သာ. သူတို့ကိုလှည့်ပတ်ထက်ပိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာကာသချင်လေ့. US မှာ, most people will stand about one foot apart from one another. သူတို့ကိုအကြားအာကာသနှင့်အတူအုပ်စုတစ်စုရပ်တည်ချက်အတွက်လူတွေတောင်မှ. သငျသညျတစ်စုံတစ်ဦးကိုအလွန်နီးကပ်ရပ်လျှင်သင်စကားပြောသည့်အခါ, သူတို့သည်သင့်ပြင်းထန်တဲ့သို့မဟုတ်အလွန်အမင်းအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ခြင်းနေကြသည်ထင်စေခြင်းငှါ. သူတို့ကပြန်မယ့်ခြေလှမ်းကို ယူ. ပျော့အံ့အားသင့်စရာသို့မဟုတ်မရရှိခြင်း၏ပြသခွေငျးငှါ. အခွားသောအမေရိကန်များအလွန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ကြပြီးသူတို့ပထမဦးဆုံးအသင်တို့ကိုတွေ့မြင်ကြသောအခါသူတို့သင်စကားပြောသို့မဟုတ်ပွေ့ဖက်နေစဉ်သင့်ရဲ့လက်မောင်းကိုကိုင်စေခြင်းငှါ. သင်တို့ကိုမသက်မသာစေသည်ဆိုပါက, it is okay to step back.
We encourage you to maintain important parts of your culture. သို့သော်, looking people in they eyes when you talk is an one thing you can do to adapt to life in America. သူတို့စကားပြောနေကြသည်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်များမျက်စိရှိလူများကိုကြည့်လေ့. သူတို့ဟာတစ်ခုလုံးကိုစကားပြောဆိုမှုတွေအတွက်မျက်စိ၌သင်တို့ကိုအကြည့်အရှုမပြုစေခြင်းငှါ - ကဖွင့်တစ်စိတ်တစ်ဒေသ. တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်အားပြောသွားနှငျ့သငျမကျြစိ၌သူတို့ကိုကြည့်ရှုမည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, သူတို့သည်သင့်အရာတစ်ခုခုကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားနေသို့မဟုတ်လျှို့ဝှက်ဖြစ်ခြင်းနေကြသည်ထင်စေခြင်းငှါ.
အများစုကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ဦးအညီမိမိတို့၏အလှည့်စောင့်ဆိုင်းရန်ငယ်ရွယ်စဉ်ကနေဆုံးမသွန်သင်ကြသည်. ဒါကြောင့်, သင်စတိုးဆိုင်မှာဒါမှမဟုတ်ရုပ်ရှင်လက်မှတ်ဝယ်ဖို့ကြိုးစားနေမယ်ဆိုရင်, သငျသညျဖြစ်ကောင်းတစ်လိုင်းမြင်ရပါလိမ့်မည်. ယေဘုယျအားဖြင့်, ကလူတဦးတည်းအားဖြင့်တဦးတည်းတန်းစီခိုင်းတယ်. တခါတရံသင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုမြင်စေခြင်းငှါ “တစ်ဦးပွဲချင်းပြီးကိုင်” တစ်စုံတစ်ဦးအတွက်, ဒါပေမယ့်အများအားဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံသားသူတို့ရဲ့အလှည့်စောင့်ဆိုင်းရန်မျှော်လင့်ထား. သငျသညျတစ်စုံတစ်ဦးကမျဉ်းသို့ဖြတ်တွေ့မြင်နိုင်ပေမဲ့ (သငျသညျများ၏ရှေ့မှောက်၌သွားပါ), လူအများစုကသူတို့အလှည့်စောင့်ဆိုင်းပါလိမ့်မယ်. သင်တစ်ဦးလေယာဉ်ပျံပေါ်မှန်လျှင်ဤသည်ကိုလည်းမှန်. ပြည်သူ့ယေဘုယျအားဖြင့်ကသူတို့အတန်းရဲ့အလှည့်ဖြစ်ပါတယ်အထိလေယာဉ်ပျံမှထွက်ခွာရန်စောင့်ဆိုင်း.
သင်တစ်ဦးအဆောက်အအုံမထွက် / ဝင်ရောက်ကြသောအခါအများစုကအမေရိကန်နိုင်ငံသားသင်တို့အဘို့အပွင့်လင်းတဲ့တံခါးကိုကိုင်ထားလိမ့်မယ်. သင်တစ်ဦးသည်လူသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်ကြောင်းရှိမရှိ, သငျသညျနောက်ကွယ်မှလူတစ်ဦးအတွက်တံခါးကျင်းပရန်ယဉ်ကျေးကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.